I-Evaporative Condenser, Ukupholisa Umbhoshongo, Ukwelashwa Kwamanzi - iYubing
Ama-coolers ethu asetshenziswe kabanzi emikhakheni eyahlukahlukene ukuzihlanganisa nezinto ezipholile.
Ukugcinwa okuphansi nezindleko zamandla kungumphumela wedizayini engenazinkinga.
Ngaso sonke isikhathi bhekela ukusebenza kwezindleko okuphezulu kuwo wonke umjikelezo wempilo.
Phishekela ukuphathwa kwephrojekthi okuthembekile futhi uphendule ngokushesha kusevisi yokuthengisa ngemuva.
Umkhiqizi Onguchwepheshe Wokupholisa Tower System
High-kahle Condenser evaporative for Indus ...
Uhlelo lwe-ICE Industrial Reverse Osmosis lweCooli ...
Uhlelo lwe-ICE High Efficiency Sand Filtration lwe ...
Ukuphumelela okuphezulu nokonga amandla
Nciphisa amandla wesistimu, ukusetshenziswa kwamanzi, ukugcinwa kanye nezindleko zokufaka ngamandla aphezulu okupholisa.
Khulisa ukusebenza ngempumelelo kwezindleko kuwo wonke umjikelezo wempilo.
Xhuma futhi udlale imiphumela yokuqanjwa kokufakwa okulula, ukonga.
Luhlala Isikhathi Eside Futhi Ithembekile
Okungonakalisi, impilo ende nesisindo esincane.
Imibhoshongo yokupholisa imvamisa ibekwa ngaphakathi ezimbonini njengenye yezinto ezibalulekile kanye neminye imishini eminingi esindayo kuyunithi yezimboni ebilokhu ibambe iqhaza ekukhiqizeni, ekucubunguleni nasekuhlanganiseni imikhiqizo. Izinqubo ezahlukahlukene zezimboni zenza amanzi ashise afakwa emibhoshongweni yokupholisa. Imibhobho yemibhoshongo yokupholisa ifafaza amanzi ashisayo “kumithombo yezindaba yokugcwalisa” lapho kunendawo ephezulu kakhulu futhi lokhu kuholela ekuxhumaneni nomoya wamanzi ukupholisa amanzi. Imibhoshongo yokupholisa isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokuhluza uwoyela, izitshalo ze-petrochemical, izitshalo zamandla ezishisayo, izitshalo zenuzi, izitshalo zokucubungula ukudla, izitshalo zegesi yemvelo njll.
Singajabula ukuthola imibuzo yakho futhi sinikeze ukusekelwa ngokushesha.
UNovemba 11, 2020
Novemba 01, 2020